Mahatalanjona mahatsiravina ao amin'ny panantonana Coronavirus nosoratan'i Dr. Wolfgang Wodarg? : Martin Vrijland
Mahatalanjona mahatsiravina ao amin'ny panantonana Coronavirus nosoratan'i Dr. Wolfgang Wodarg?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 19 Martsa 2020	• 6 Comments
Wolfgang Wodarg dia dokotera sady mpanao politika ho an'ny SPD. Amin'ny maha-filohan'ny komity parlemantera ny Komitin'ny Fahasalamana ny Filankevitra Eropeana, dia nanasonia vahaolana i Wodarg tamin'ny 18 Desambra 2009, izay noresahina vetivety tamin'ny adihevitra maika tamin'ny Janoary 2010. Niantso hanaovana fanadihadiana ihany koa izy mikasika ny fiampangana tsy ara-dalàna ny fikambanan'ny orinasa fanafody momba ny fampielezan'ny flu H1N1 manerantany.
Feo coronavirus iray hafa
Dr. Wodarg dia nanambara fa misy resaka momba ny vokatry ny angano "Tsy mitafy akanjo ny emperoraIzay tsy nisy sahy nilaza fa tsy mitafy akanjo ny emperora. Tsy nisy sahy nanaiky ny hahita an'io; afa-tsy ankizilahy kely. Ny olona rehetra dia hita fa resin'ny fitaoman'ny namana.
Ity hafatra ity dia azo inoana fa esorina ho vaovao sandoka avy amin'ny haino aman-jery mahazatra na efa voasivan'i Facebook tanteraka aza. Sa avelan'ny Facebook hamita izany hafatra izany? Dia hasehoko anao ny antony hazavaiko eo amin'ny farany ambany amin'ny lahatsoratra.
Amin'ny alàlan'ny governemanta kominista teknolojia ho avy, dia mety tsy ho nahare tantara iray ihany ianao. Avy eo dia tsy maintsy mihaino ny fahamarinan'ny politburo ianao. Fa ny fitondrana kominista teknolojia toy izao dia mivoatra haingana, eo ambanin'ny fe-potoam-pitsarana amin'ny coronavirus, manazava amin'ny an-tsipiriany aho. ity lahatsoratra ity.
Raha ny tsiriko dia nahita maso tsy an-kiato ny mpitondra eran'izao tontolo izao isika fa ny fihanaky ny coronavirus dia PsyOp (fandidiana ara-psikolojika) nampiasaina hamotehana ny toekarena ary hahatratra ny tanjona napetrako. io lahatsoratra io hamaritra. Midika ve izany fa tsy misy ny coronavirus? Tsia, fa misy io coronavirus io. Na izany aza, tsy manalavitra fa mety ho namboarina bioweapon. Mety ihany koa ny fisian`ny fahavoazana ratsy fanavakavahana.
Izahay dia manatri-maso ny famoronana ny 'script master' izay fararako ao amin'ny boky. Ankehitriny hitanao fa efa nanao faminaniana marobe maromaro aho, fotoana izao hanilihana ny fanelezan'ny eritreritra feno tsikombakomba ary tena hahafantaranao izany 'master script' izany, mba hahafahanao mahita izay mitranga ary manomboka izao dia afaka mahazo toerana milamina ianao. Ao amin'ny bokiko dia efa voalazako mialoha fa mbola misy areti-mifindra hafa toy izao. Azafady vakio ity boky ity ary vakio avy eo ity rohy ity ny famoahana ho an'ny boky.
Tantely tantely, mifehy ny fanoherana
Mety ho i Dr. Wodarg dia napetraka hamoaka feo mitsikera mafy (jereo ny lahatsary etsy ambany); feo mitsikera izay saika hikasika ny marina, saingy mampiseho am-panafody tarehin-javatra diso, hany ka mety haverina ho toy ny vaovao sandoka izany. Ohatra, ny fanivanana media sosialy dia azo ampiharina ary ny tranonkala toa an'i martinvrijland.nl dia afaka terena hanidy (raha zaridaina ao aho). Ny lalao dia nilalao amin'ny fomba fahita toy izany.
Tanjona amin'izany paikady izany? Miezaha handresy lahatra ny rehetra fa ny zavatra tsy vaovao amin'ny media mahazatra dia vaovao sandoka.
Io fomba io dia antsoina hoe paikady «tantely tantely»; paikady iray izay mametraka ny vela-pandrika amin'ny serasera ny 95% amin'ny fahamarinana diso sy ny fandefasana azy (ny tenanao) amin'ny alàlan'ny pahefana (mpanohitra voafehy). Ka tsy afaka milaza aho amin'ny fahatokisana 100% na ny tantaran'i Dr. Wolfgang Wodarg marina amin'ny isa. Azoko atao ihany ny manamarina ny fomba fijeriko manokana. Ahitanao ato amin'ny tranokala sy ao amin'ny boky ny fijerinao ireo.
Na izany aza, manan-danja ny mitandrina ny fomba fiasa mifehy ny tantely «tantely tantely». Ho maheno ny marina manontolo ianao, fa hihosotra hosoka kely, noho izany dia tsy maintsy atsipy amin'ny rano fandroana ilay zaza.
Tags: ny, Ander, communisme, Coronavirus, Dr., Featured, tsy misy, feo, manana, saritaka. ny, mpanjaka, akanjo, fitafiana, politburea, psyop, technocratic, Wodarg, Wolfgang
21 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 18
Manaitra ny mahita fa ireo mpanao politika (raha mijery any Holandy) dia samy ao amin'ny pejy iray ihany. Avy eo ankavia miankavia, izy rehetra dia mandray anjara amin'ny hype rehetra. Ny tsy fitovian-kevitra ihany dia eo am-pandehanana, izay ny antoko eo amin'ny ankavanana sy ankavia maniry ny hidina tanteraka ary ny antoko somary haingo dia maniry fanakatonana tsy mihetsika. Saingy raha ny fotokevitra dia izy rehetra dia eo amin'ny tetika avokoa ary mandray anjara avokoa. mitovy amin'ny haino aman-jery, tsy misy hisalasala raha tena ratsy ny tsimok'aretina corona ary na tsy kely kokoa aza ny fepetra raisina (ohatra: 1000x).
Na izany aza, misy mazava fa mbola misy ny olona ao amin'ny NL (mety ho mihoatra noho ny eritreretintsika) izay manana fisalasalana matotra na somary matotra momba ny zava-mitranga, ary i Jensen dia voatazona hiatrika an'io. Azon'i Jensen hisambotra ireo mpisoloky sy olona tsy mino azy, afaka manatanteraka ny asa "honeypot" any Holandy ho an'ny olona tsy mino izany.
Maninona ny olona no manao an'izany? Jensen dia nilaza fahamarinana marobe tao amin'ny podcast nataony, saingy mazava ho azy dia tonga ny orana mangatsiaka rehefa nanondro ny antony nanakalozana ny elite de mondiale io coronavirus io: Nilaza izy fa tsy maintsy resy i Trump, ary satria "Marina" (ka manohitra ny globalisma) dia nandresy. ary izany dia tsy maintsy resy indray mandeha ary ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fampidinana ny jadona hiady amin'ny corona.
Ka dia nosamboriny ireo mpamoaka olona sy olona tsy mino azy dia nalefany ho any anaty ala.
21 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 51
Jensen no lalana farany ary tsy maintsy misarika ny mpamaky lavitra an'i Vrijland. Manampy an'i Trump ho mahery fo fotsiny izy. Tsia, efa an-taonako ity no nanoratako azy: ny mpanao politika tsirairay avy miankavia sy miankavia kosa dia saron-tava samihafa amin'ny lafiny mitovy. Tsy niresaka ahy mihitsy i Jensen. Tsy misy sahy ary mety hiresaka ahy sy ny bokiko. Izany no fandrahonana lehibe indrindra ho azy ireo.
21 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 02
Mampalahelo fa be dia be ny olona nandaka an'ity "trandraka bitika" ity.
21 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 08
Angamba mety handefa fanehoan-kevitra eto amin'ny podcast youtube an'ny jensen misy rohy mankany amin'ity tranonkala ity ny mpaneho hevitra. Angamba hoesorina avy hatrany ireo fanehoan-kevitra rehetra ireo fa raha tsy izany dia mety foana ho hisy hiafara eto eto.
Head fish nanoratra hoe:
21 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 39
Mitombo hatrany i Martin
veloma Babylona nanoratra hoe:
21 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 16
Raha ny resaka fanoherana voafehy, dia tsy iray amin'izy ireo ihany koa i Jensen
« Ahoana ny fomba hiatrehana ny fepetra coronavirus (fanidy): torohevitra azo ampiharina
Ianaro izay tokony hatao ary inona no tokony hatao amin'ny fanakatonana coronavirus ho avy »
Total visits: 1.201.552